पाँच कक्षा पास ९४ वर्षे बृद्ध जसको तलब ३३ करोड रुपैयाँ ! « Clickmandu
पाँच कक्षा पास ९४ वर्षे बृद्ध जसको तलब ३३ करोड रुपैयाँ !
प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७३, मंगलवार १०:००
मुम्बई । भारतीय उपभोक्ता बजारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने प्रोडक्टको सिइओ सबैले चिनेका व्यक्ति छन् । एमडीएच मसालाको हरेक प्याकेटमा ९४ सालका धरमपाल गुलाटी पगडी लगाएर बसेको तपाईहरु देख्नु भएको छ ।
पाँच कक्षा मात्र पास गरेका ९४ वर्षे धरमपालले गत आर्थिक वर्षमा २१ करोड भारतीय रुपैयाँ कमाए ।यो कमाई गोदरज कन्जुमरका आदि गोदरेज तथा विवेक गंभिर,हिन्दुस्थान युनिलिवरका संजिव मेहता तथा आईटिसीका वाई सी देवेश्वरको भन्दापनि बढी हो । उनको कम्पनी ‘महाशिया दि हट्टी’ जुन एमडीएचको नामबाट लोकिप्रय छ । कम्पनीले गतवर्ष मात्र २ सय १३ करोड भारतीय रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । कम्पनीमा ८० प्रतिशत हिस्सा गुलाटीसँग रहेको छ ।
पाँच कक्षा मात्र पास गरेका गुलाटीलाई दादाजी वा महाशयजीको नामबाट पनि जानिने गरिन्छ । उनीको पहिचान मेहनती तथा उद्यमीको रुपमा छ । उनी उद्योग,बजार तथा डिलर्सहरुमा नियमित भ्रमण गरिरहेका हुन्छन् । उनी साप्ताहिक बिदा हुने दिन आइतवारपनि कार्यालय गइरहेका हुन्छन् ।
कम्पनीले गतवर्ष मात्र २ सय १३ करोड भारतीय रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । कम्पनीमा ८० प्रतिशत हिस्सा गुलाटीसँग रहेको छ ।
दोस्रो पुस्ताका गुलाटीले ६० वर्ष अगाडि एमडीएच शुरुवात गरेका थिए । ‘ मलाई काम गर्नको लागि उपभोक्ताको मायाले प्रेरणा दिन्छ, उपभोक्तालाई न्यून मुल्यमा गुणस्तर सामानको उत्पादक गराउने हो’,गुलाटीले भने । उनले लिने तलबको ९० प्रतिशत रकम सामाजिक सेवाको लागि खर्च गर्ने गरेका छन् ।
सन् १९१९ मा पाकिस्तानको सियालकोटका एउटा सनो पसल खोल्ने चुन्नी लालले कहिलेपनि व्यवसायमा विशाल साम्राज्य खडा गर्ने विषय सोचेका थिएनन होला । १५ सय करोडको व्यवसायिक कारोवारमा गुलाटीको ८० प्रतिशत हिस्सा मसलाको रहेको छ भने २० प्रतिशत हिस्सा स्कूल र हस्पिटलको रहेको छ ।
भारत विभाजनपछि गुलाटी दिल्लीको करोल बागमा आएर बसेका थिए । भारतमा १५ उद्योग एक हजारभन्दा बढी डिलर कम्पनीको रहेको छ । एमडीएचको दुबई र लन्डनमा पनि व्यवासयको कारोवार फैलिएको छ । एक सय देशमा मसलाको निर्यात हुने गर्छ । अहिले कम्पनीको काम गुलाटीका छोराले गर्छन् भने उनका ६ जना छोरीले बिक्री वितरणको काम हेरिरहेका छन् ।
कम्पनीले सफलताको श्रेय भने सप्लाई चेनलाई दिने गरेको छ । कन्ट्राक फार्मिङ यो या कर्नाटक,राजस्थान सहित अफगानिस्तान र इरानमा मसला मगाउनको लागि कम्पनीको सप्लाई चेन निकै चुस्त छ ।
एमडीएचको ६० भन्दा बढी उत्पादन छ । जसमा सबैभन्दा बढी खुसार्नीको तथा चाट र चना मसला बिक्री हुने गर्छ । इकोनोमिक्स टाइम्सबाट